Ukubhema kunokuthenjwa ngokufanelekileyo njengenkqubo efanelekileyo yempilo yomzimba womntu. I-Nicotine inokubulala ezingama-36 iintlobo ze-microbes, ezisibhozo zazo eziyingozi. Ngenxa yezenzo ze-nicotine, iiseli zobuchopho ezindala kunye nomzimba zibuthathaka kuqala. Imijelo ehlala ekubhemeni kwimiphunga yenza kube nzima ukuba umoya ungene kwi-alveoli, ukunyanzelisa umzimba ukuba ukwandise ngokukhawuleza ukuhamba kwegazi emgumbini. Ngaphandle kokutshaya, umphumo onjalo wokunceda unokufumaneka kuphela ngokuzilolonga okunzulu okanye ngokuphefumula okunzima. Inkqubo yokumisa umsi, ngaphezu koko, yindalo yemvelo yokuphefumula.
Inkolelo yokuLawula iintsuku
Bathi awukwazi ukutshaya rhoqo. Njengoko, luncedo ukulungiselela ukulayisha iintsuku ngaphandle kwegwayi, ngaloo ndlela ukunciphisa ingozi ekubhemeni. Enyanisweni, le mihluko ayinakuvunyelwa! Oko kukuthi, ukuba usubhembile, ke umsiya. Naluphi na ukuphuka kunye nokutshaya okulandelayo kuya kwenza umonakalo omkhulu kunokuba ushiye ukutshaya imihla ngemihla. Kungenxa yoko kuyimfuneko ukuyeka ukutshaya "ngendlela ehlakaniphile". Awukwazi ukuwuphonsa ngokukhawuleza, kodwa ukuba usuyifake - awuyi kubuya ukutshaya ngonyaka okanye ezimbini.
Inkolelo Yokubhema neMidlalo
Bathi imidlalo kunye nokutshaya akuhambelani ngokupheleleyo. Oku kungcolileyo. Mhlawumbi kwithempyutheni ye-TV awuyi kubona umdlali onogada, kodwa ebudeni boqhelekileyo-eninzi njengoko ufuna. Yintoni eyenza abagijimi batsha? Ngenxa nje yokubhema emzimbeni, indlela yokuhlawulela iyasebenza-i-hemoglobin transfer and attachs more oxygen ngaphezu komntu ongabhemi. Ubomi bemihla ngemihla akubonakali, kodwa phantsi kwemithwalo enzima izibonelelo zibonakala.
Kufuneka kuthathelwe ukuba umda wezakhono zomntu sele ufikelele kwizemidlalo zamazwe ngamazwe. Akukho qeqesho lunokukunceda ukwandisa. Kwiintambo zamagosa abagijimi beemidlalo, amaqela okuhlaziya ahlale ekulindele ukuba abadlali bafikelele. Emva koko, bambalwa abantu bayazi ukuba abaninzi abagijimi-marofonchikov - bayakhubazeka nge-asthma engapheliyo. Basenokusebenzisa ngokusemthethweni i-mudope, isichengisi esibandakanya i-nicotine.
Intsomi yeNgqamlezo yeSitya ngenxa yokuSalela
Okokuqala, imithwalo yegazi iminyene, kuphela xa ubhema kakhulu - iipakethe ezininzi ngosuku. Okwesibini, izazinzulu zanamhlanje zifumene iziphumo zophando malunga nomphumo we-nicotin kwinkqubo yethu yokujikeleza, ukuphula zonke izigwebo zemveli malunga neicotine. Kuvela ukuba iicicin kuphela ivuselela ukujikeleza kwegazi!
Kwimvavanyo kwiigundane, kwafunyaniswa ukuba iicicin ivuselela ukulungiswa kwemisipha kwaye ivuselela inkqubo ye-nervous. Kukho ukuvakalelwa kukuba ngo kwamkela i-nicotine iigundane zivavanya amandla. Kuboniswa ukuba iicicin ingasetyenziselwa ukuphilisa ngokukhawuleza kwilonda kunye nokuphathwa ngempumelelo kwezifo ezinxulumene nezifo ezijikelezayo. Iingcali zenzululwazi ngoku ziphanda ukuba i-nicotine inokunceda abantu abaneengxaki ezinkulu zeengqondo.
Kanye kunye nomsi womsila ongcolileyo, ababhemayo baphefumula izinto ezininzi kunye ne-oksijini, kwaye i-nicotine ngokwayo isebenza njenge-antibiotic efanelekileyo yendalo. Ibulala amabhaktheriya ngaphakathi emlonyeni, emaphaphu kunye ne-larynx - iindidi ezingama-36 ezinobungozi be-microorganism eziyingozi. Kubonakala ukuba abantu abavuthayo abazange bafumane i-herpes emilonyeni yabo nangobuso.
Umbuzo wendlela yokutshaya. Ukuba kukho umsi obunzima kumsiza, ke lo ngumtsalane ochitha imveliso ebalulekileyo. Umtshatyha wangempela ukhutshwa ngamandla, ubambe umsi ixesha elide emiphakeni, apho zonke iziqhamo eziqhenkcezayo zithathwa. Umntu otshaya ngokufanelekileyo unokungabi nengozi kwimeko engaphezu komntu ongabhemi, ekubeni udla ihafu yeoksijini.
Ngokuqhelekileyo, umntu otshaya uhlala efanelekileyo ngokufanelekileyo kummandla. Ngexesha elibalulekileyo ephaketheni lakhe kukho iiminganiso ezingasetyenziselwa ukukhanyisa umlilo, ukukhanyisa indlela yakho okanye ukufudumala. Umtshayili akanalo iingxaki, ukuba ufuna ukuthetha okanye ukumazi umntu - kuyimfuneko kuphela ukucela ugwayi. Ngako oko, ukutshaya kukhuthazwa ngabantu abajongene nobutyebi bemvelo.
Amandla kunye nezinye izitya
Iindlela zokurhweba iklabishi
Ukuthenga izipho ezilungileyo zeeholide
Iingcebiso malunga nendlela yokukhetha i-mink coat
Biography, uTatyana Dogileva
U-Polina Gagarina wasuswa kwi-Instagram engafumananga nesithombe kunye nendoda yakhe
Indlela yokuqhuba kakuhle ukukhupha iintsuku kwijusi